Nagu saabsan - Xuzhou Shengsida Dhismaha Makiinado Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2005, Xuzhou sheng si da Machinery Co., LTD, wuxuu ku takhasusay ganacsiga qalabka caadiga ah ee mashiinada dhismaha iyo mashiinka oo dhameystiran.
Shirkadda ka horreysey waa mid ka mid ah shirkad-bixiyeyaasha bilowga ah ee XCMG, Zoomlion, Sany Heavy Industry Co., LTD iyo Guangxi Liugong Machinery Co., LTD, oo la aasaasey sanadkii 2000, kuwaas oo muddo dheer u shaqeynayey suuqa gudaha kuna guuleystey bogaadin sare waxaana si weyn u aaminay macaamiisha. Iyada oo horumarka degdegga ah ee caalamiyeynta, shirkaddayadu waxaa loo aasaasay ballaarinta suuqa caalamiga ah.
Waxay ku yaalliin magaalada xarunta gaadiidka muhiimka u ah Shiinaha –Xuzhou, oo sidoo kale loo yaqaan "OrientalAthens" iyo "magaalada mashiinnada dhismaha ee Shiinaha", waxaan ku raaxeysaneynaa helitaanka habboon ee shabakadaha gaadiidka waaweyn, khibrad soo saar iyo suuq-geyn badan iyo sidoo kale heer sare tayada wax soo saarka wax soo saarka. Suuqyadeenna ugu waaweyn waxaa ka mid ah Ruushka, Afrika, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Aasiya iyo dalal kale.
Xakamaynta tayada adag waxay dabooshaa hanaan kasta, laga bilaabo soo-saarista maaddada iyo ka-baaraandegidda illaa baaritaanka iyo xirxirashada, ku dadaalka gaaritaanka ujeeddada tayada ee "tayo sare iyo cillad eber ah".
Iyada oo ku saleysan wax soo saarka tayo leh, adeeg aad u fiican, qiimo macquul ah iyo gaarsiinta waqtigeeda, waxaan rajeyneynaa iskaashi wanaagsan oo lala yeesho wada-hawlgalayaasha gudaha iyo dibedda iyo abuurista mustaqbal cabsi leh.
Qalabka dayactirka asalka ah
Fadlan nala soo xiriir wixii dayactir asal ah. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale nahay alaab-qeybiyeyaal beddelaadyo iyo adeegyo loogu talagalay noocyo badan, kuwaas oo ku soo galay khadka wax soo saarka iyada oo loo marayo helitaan istiraatiiji ah.
Qalabka dayactirka ee Crane ee noocyo badan
Waxaan aqoon u leenahay wiishashka noocyo badan, kaliya ma ahan nooca XCMG. Guud ahaan, XCMG wuxuu ka iibsan karaa qalabka dayactirka wiishka soo saarayaasha qalabka asalka ah.
Waxaan soo saari karnaa qaybo dayactir ah oo buuxinaya tilmaamahaaga. Qaybaha is-diyaariyey waxaa ka mid ah qabatooyin, giraangiraha, geerka iyo siddo. Alaabada waxaa loo heli karaa iibka meelaha la xushay, fadlan nala soo xiriir wixii faahfaahin ah.
Daryeelka wareegga nolosha
Habkayaga dayactirka wiishku wuxuu ku saleysan yahay daryeelka meertada nolosha, taas oo ah hab dhammaystiran oo habaysan oo nidaamsan oo ay taageerayaan aaladaha casriga ah iyo geeddi-socodka. Daryeelka wareegga nolosha wuxuu gaaraa qiimaha wareegga nolosha qalabka sare iyadoo la hagaajinayo wax soo saarka waqtiga shaqada iyo yareynta kharashka waqtiga dhimista.
Waxaan u adeegsannaa Internet-ka Warshadaha si aan meel fog ugala soconno, u baarno, u falanqeyno, una saadaalino adeegyada dayactirka ee ku saleysan isticmaalka. U siiso macaamiisha macluumaad hufan oo la wadaago, waqtiga-dhabta ah ee waayo-aragnimada macaamiisha gaarka ah.
Dhaqanka badbaadada iyo diiwaanka
Konecranes, wax ka muhiimsan oo ka muhiimsan ma jiraan hubinta in shaqadeena loo qabtay si nabad ah oo sax ah.
Adeegyadayada la-talinta waxay naga caawinayaan in si qoto dheer loo fahmo howlahaaga iyo howlahaaga.
Ballanqaad adeeg oo dhammaystiran
Konecranes waxay bixisaa xirmo dhammeystiran oo ah barnaamijyo adeegyo habaysan iyo alaab ah si loo daboolo baahiyahaaga.
Masaafada Masaafada Macaamiisha
Waxaan leenahay shabakad adeeg oo caalami ah, waxaan kaloo leenahay 600 xarumo adeeg oo ku yaal 50 dal.
Shirkad aad u wanaagsan, waxaan soo jiidanay tiro aad u tiro badan oo tayo sare leh. Way sii joogi karaan sababtoo ah ballanqaadkeenna ah inaan gaarno koritaan iyo horumar.
Waxaan haynaa tababaro farsamo iyo barnaamijyo shahaado oo loogu talagalay hagaajinta amniga iyo wax soo saarka. Adeeggeenna waxaa taageera shabakadda adduunka ee teknoolojiyadda horumarsan.
Waxaan nahay soo saare qalab horumarsan oo in kabadan 100 sano oo khibrad ah iyo 600,000 oo qalab ah oo lagu daray qandaraasyada dayactirka. Khibrada Konecranes waxay la mid tahay magacyada la soo iibsaday iyo saldhigga macaamiisha. Waxaan u leenahay xuquuqda lahaanshaha aqooneed dhammaan noocyada-hoose ee la soo iibsaday.
Maaddaama ay tahay shirkad heer sare ah oo si joogto ah u baareysa aagagga R&D iyo teknolojiyadda casriga ah, waxqabadkeenna ku aaddan bixinta iyo taageeridda alaabooyinka iyo adeegyada hal-abuurka leh si wanaagsan ayaa loo helay.
Waxaan sugeynaa inaan kuu adeegno. Alaabtayada ugu muhiimsan waa sida soo socota. Hadana haddii aad u baahan tahay macluumaad kale oo aan lagu xusin, fadlan si xor ah ha noola soo socodsiiso.